१०१ यौन आसनको पुस्तक संभोग कला - Younka Kura
written by YounKaKura January 13, 2018
गेलाल प्रकाशनद्वारा निकट भबिष्यमा प्रकाशन हुन लागेको भनी निकै चर्चामा रहेको, वरिष्ठ यौन तथा प्रजनन बिशेषज्ञ डा.सुबोधकुमार पोखरेलद्वारा लिखित “सम्भोग कला” नामक पुस्तक आधुनिक कामसूत्र हो या कोकशास्त्र (पोर्नोग्राफी) हो भन्ने बारेमा बजारमा बिभिन्न किसिमका अड्कलबाजि चल्न थालेको छ ।
सम्भोग मानव जीवनको यौटा महत्वपूर्ण पाटो हो । सम्भोगबाट नै सृष्टिको निरन्तरता रहन्छ र मानवको अस्तित्व रक्षा पनि हुन्छ । यसबाट यौनजोडी बीचको अन्तरसम्बन्धले निरन्तरता पनि पाउँछ । मनोशारीरिक आनन्द र पुनर्ताजगीको लागि पनि सम्भोग जीवनको अभिन्न पक्ष भएको कुरा पुस्तकका लेखक डा. पोखरेलको दाबी छ ।
सम्भोग आफैमा यान्त्रिक बिधि मात्र हो या कला पनि हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यो पुस्तक पढेर पाईने उहाँ बताउनु हुन्छ । कुनै शंका, चिन्ता र नकारात्मक अनुभूतिबिना संभोगमा जोडीहरु निर्धक्क भएर संलग्न हुने वातावरणको ज्ञान, अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा पस्किने प्रयास गरेको लेखकको भनाई छ । किशोर, युवा, प्रौढ र बृद्ध–बृद्धाका लागि समेत उपयोगी हुनसक्ने यो पुस्तक वात्सायानद्वारा रचित कामसूत्रकै आधुनिक परिवेश र बैज्ञानिक बिकास तथा जीवनपद्धति संग मेल खाने परिमार्जित स्वरुपमात्र नभई यौन समस्या र तिनको निराकरणको बिषयमा पनि केन्द्रीत रहेको उहाँको भनाई छ ।
यो कोकशास्त्र अथवा पोर्नोग्राफी नभएर आफूले विद्यावारिधि गर्दाको अनुभव र अनुसन्धानमा आधारित बैज्ञानिक जानकारीहरु सहितको रचनात्मक प्रस्तुति भएको उहाँ दाबी गर्नु हुन्छ । उक्त पुस्तकमा बिभिन्न यौन आसनहरुको सचित्र ब्याख्याले प्रयोगात्मक पक्षमा पनि पुस्तक उपयोगी हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ ।